QIIMAYN: Tobankii Xiddig Ee Ugu Wanaagsanaa Xulka Qaranka England Oo La Qiimeeyey & Halyeyga Aanad Garoomada Ku Arag Ee 1aad Ku Jira - Gool24.Net
QIIMAYN: Tobankii Xiddig Ee Ugu Wanaagsanaa Xulka Qaranka England Oo La Qiimeeyey & Halyeyga Aanad Garoomada Ku Arag Ee 1aad Ku Jira
Halyeygii Manchester United ee Sir Bobby Charlton ayaa loo magacaabay xiddigii ugu wanaagsanaa ee soo maray taariikhda xulka qaranka England, kaas oo sannadihii uu ciyaaraha ku jiray guulo ku hoggaamiyey waddankiisa.
82 jirkan ayaa waqtigiisii waxa uu ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or, waxaana uu ku suntan yahay taariikhda waddankiisa oo uu baal-dahab ah kaga jiro, waxaana qiimayn la sameeyey uu kaalinta koowaad ka galay toban ciyaartoy oo lagu tilmaamay kuwa ugu fiicnaa Ingiriiska.
Charlton waxa waqtigii uu ciyaaraha ku jiray uu Manchester United kula guuleystay koobab badan oo ay ka mid ahaayeen saddex horyaal, FA Cup iyo European Cup muddo 17 sannadood ah oo uu Old Trafford ku jiray.
Xulka qaranka England ayuu sannadkii 1966kii sabab ugu noqday Koobka Adduunka ee kaliya ee uu ku guuleystay.
Wayne Rooney oo ah ciyaartoyga ugu goolasha badan Manchester United kalana wareegay Charlton oo hore u haystay booskaas ayaa liiskan kaalinta labaad kasoo galay.
Rooney ayaa intii uu joogay Manchester United waxa uu kula guuleystay shan horyaal oo Premier League ah, FA Cup, saddex League Cup iyo Champions League.
Alan Shearer ayaa kaalinta saddexaad soo cidhiidhsaday, waxaanu hore u ahaa xiddiga haysta rikoodhka goolasha ee Premier League ka hor intii aanu Wayne Rooney rikoodhkiisa dhaafin.
Frank Lampard iyo Steven Gerrard ayaa muddo ay doodi u dhaxaysay midkooda wanaagsanaa xilligii ay garoomada ku jireen, waxaana dooddooda qayb ka ahaa Paul Scholes, laakiin qiimayntani waxay muujisay in Frank Lampard uu kaga horreeyo dhinaca qaranka England, halka uu Scholes booska ugu dambaysa ee tobnaad uu fadhiyo.
Halkan kaga bogo tobanka ciyaartoy ee ugu fiicnaa xulka qaranka England: